Taratasim-baovaon’ny RV : Tongava hanaraka ny “Linguapax MOOC” momba ny fahasamihafàn’ny fiteny · Global Voices teny Malagasy
Taratasim-baovaon'ny RV : Tongava hanaraka ny “Linguapax MOOC” momba ny fahasamihafàn'ny fiteny
Voadika ny 14 Febroary 2021 13:40 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Esperanto , English
Pikantsary avy amin'ny lahatsary fanoloran'i Subhashish Panigrahi.
Fanamarihan'ny Rising Voices: ity taratasim-pifandraisanay mpivoaka indroa isam-bolana ity dia manome famintinana ireo lahatsoratra farany nivoaka momba ireo rehetra endriky ny fampiatiana nomerika, anatin'izany ny fidirana sy ny fampiasàna ireo fitaovana nomerika, ary koa ireo fomba hafa sy hetsika ahafahan'ireo vondrompiarahamonina mandray anjara feno anaty aterineto. Vakio eto ireo taratasim-pifandraisana efa nivoaka teo aloha..
Arahaba ry mpamaky, ka manao ahoana ianareo amin'izao Febroary izao? Manana zavatra mampientanentana hozaraina aminareo rehetra izahay!
Tamin'ny taona lasa, ny “Linguapax International”, ilay fikambanana mitoetra ao Barselôna dia namorona Massive Online Open Course (MOOC) iray (Fampianarana misokatra ho an'ny daholobe ety anaty aterineto) antsoina hoe Ny fahasamihafàn'ny fiteny, Hatao inona? ary nanasa ny Rising Voices sy ireo hafa manampahaizana mba hifampizara ny zavatra iainan-dry zareo. Amin'izao fotoana izao ilay lesona dia azo raisina ao amin'ny sehatra fianarana Coursera, toerana ahafahana manoratra maimaimpoana ny anarana ho an'ireo liana handray anjara. Ao anatin'io fampianarana io, ho azonao atao ny mianatra, tsy ny momba ny fahasamihafàn'ny fiteny fotsiny ihany, fa koa ireo olana eo amin'ny fampiharana araka izay niainan-dry zareo sy niatrehan-dry zareo azy ireny tanaty toejavatra isankarazany nanerana izao tontolo izao.
Fanampin'izay, ho an'ireo izay efa namaky im-betsaka tato anatin'ity Taratasim-baovao ity ny mombamomba an'i Subhashish Panigrahi, mpikambana ato amin'ny vondrompiarahamonina RV, amin'ity indray mandeha ity ianareo dia hanana vintana hifanatrika amin'Atoa Panigrahi “mivantana” ary handre azy hiresaka momba ny firotsahan'ny Rising Voices’ ao anatin'ny fikatrohana nomerika ho an'ny fiteny.
Hahafantarana misimisy kokoa momba ity fianarana ity, izay nifanampianay ny nananganana azy, tsidiho ity lahatsary fampahafantarana ity, nataon'ny Linguapax International.
Rehefa miresaka fahasamihafàn'ny fiteny… Inona no anjara toerana raisin'ny fiteny ao anatin'ny ady amin'ny fandisoana ny vaovao? Izany no lohahevitra fototry ny adihevitra tao anatin'ny kaonferansa an-tserasera izay nokarakarain'ny Rising Voices, tsy ela akory izay, niarahana tamin'ny First Draft. Tongava mamaky ity lahatsoratra ity mba hahitana ny famintinana ilay fifanakalozan-dresaka tamin'ireo manampahaizana manokana avy any Etiopia, India, ary Burkina Faso nizara ny traikefan-dry zareo avy any amin'ny misy azy momba io olana io.
Mandritra izany, tianay ny mizara aminareo ireo vaovao tsara momba ny fandresena manantantara teny amin'ny fitsaràna tao Meksika. Fitsarana voalohany io, izay tsy hoe fotsiny nametraka fanavahana ny atao hoe mpamatsy tolotra fifandraisandavitra mitodika amin'ny varotra sy ny ho ana vondrompiarahamonina, fa koa handray anjara amin'ny fanampiana hiantohana ny fahamoràn'ny fidirana amin'ireo tolotra finday ho an'ireo vondrompiarahamonina any ambanivohitra manerana io firenena io. Vakio ato ny tantara manontolo.
HETSIKA SY KAONFERANSA HOAVY
Miasa miaraka amin'ireo teratany zokiolona / na misaina momba ny fampidirana ireo zokiolona manodidina anao hampiasa ny sasantsasany amin'ireo fitaovana nomerika mety hanampy azy ireny hiaina tsaratsara kokoa ny fiainany? Mety haniry hanjohy ireo olona manana sy mifampizara izany fomba fijery izany ianao ao anatin'ity kaonferansa an-tambajotra maimaimpoana ity, 100% karakarain'ny Digital Leeds sy ireo mpiara-mitantsoroka. Andro: 25 Febroary 2021 @ 10:30am (GMT) Fanamarihana: tsaratsara kokoa raha mamandrika toerana amin'ny Eventbrite
Misy fanontaniana misokatra ho an'ireo mpampianatra, na iza na iza? Ny Creative Commons dia nanao izay ahafahana mahazo ireo andiana “Open Education Lightning Talks“ avy aminy mba ho azo raisin'ny tsirairay liana amin'io lohahevitra io. Raha tsy vitanao ny nanjohy ireny resadresaka tamin'ny Desambra lasa teo ireny, vintana ho anao ny handre izay azon'ireo mpandray fitenenana ireo hambara momba ny asa ataony.
Mila fanampiana kely ve ianao momba ny drafitrao fiarovana nomerika, sa mitady ny hanao izay hahatsara kokoa ny efa eo? Mety ho tianao ny hitsirika ny Umbrella — fampiasa manana loharano malalaka, “creative commons” — an'ny Security First. Aza misalasala mizara ny eritreritrao miaraka aminay raha te-hanandrana azy io ianao!
VAKITENY, FIHAINOANA, ary FIJERENA FANAMPINY
Isaorana i Eddie Avila nandray anjara tamin'ity taratasim-baovao ity.